Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Kufakiwe Expert Semalt Guide Fournit Un En 10 Étapes Sur Le Marketing Du Contenu Du Commerce Èlectronique
Le reférencement et le marketing de contenu yizimpendulo. Nokho, uma ngabe i-planifié ne-implementé ilungile, le content ingathuthukisa ukubhekwa kokusebenza kokusesha. Ngakho-ke, ukuphawula ungafaka kanjani imingcele ye-SEO nesidingo sokuqukethwe?
Thola le mibandela emibili noma, elandelwa ngu-Artem Abgarian, iMenenja yePhasimende eMpumelelo enkulu i-Semalt .
1. Discover what customers are looking for
Les specialists du marketing baqhubekela phambili ngokushesha ekusebenziseni imfundo yokuhlola ukuthola izidingo zabo. I-alternative technique kanye nokushesha kokuqukethwe kwezinto ezidingekayo yizinkampani kubasebenzisi be-keyword SEO. Dlulisa amehlo, khetha ukuphendula imibuzo abantu abayifunayo besebenzisa i-engines kanye ne-intanethi kanye nezinsizakalo ze-plus.
2. Khetha izinhlobo zezinto eziqukethwe ku-bonus
Uma kunesibalo esiphezulu esihlokweni esikufunayo, izintandokazi zesikhathi eside zingaba kuhle. Ngaphandle kwalokho, lezi zinto kufanele zibhalwe ngokulandelana kwezilimi ezisetshenziselwa ukuvakasha. I-des des meilleurs moyens de déterminer le meilleur type de contenu iqukethe ukunakekelwa kwezihloko ezisezingeni eliphezulu ku-Google.
3. Ungazihlanganisi nombhalo wezincazelo
Noma ngabe izinjini zomshuwalense zinekhono eliqhubekayo ngokuqhubekayo, akudingeki ukuba uthole umbhalo wezincazelo ukuze uthole ukwaziswa okuqukethwe, le contexte et les images d'une vidéo. Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza
4. Ungalokothi ukwenze lokhu
Namathisela okuqukethwe okuhambisana nezinsizakalo nemikhiqizo enikeza yona. Cela kungaba njengendlela ecacile. Kodwa-ke, abacwaningi bahlale benesithakazelo nge-infini de concepts, information and products..Ngakho-ke, vele ukhiqize okuqukethwe kokuqukethwe kwezihlobo zakho.
5. Ungalokothi ukhethe ukuphathwa
Faka isikhala somphakathi. Ngaphandle kwalokho, ama-telespectateurs asebenzisa amagama afana ne-SEO njenge-affaires, ukushiya i-jargon nokudala okuqukethwe okuhlukile ngokusebenzisa un langage descriptif et elula. Nokho, ngokubhekisele kuma-keywords, wena uke wenza olunye ulwazi ngokubheka konke okulandelayo.
6. Yini okusha, sale
Les commerçants de commerce électronique bafuna ukuthi abathengi bafike endaweni yabo njalo uma befuna futhi bezotholakala yi-content etholakalayo. Nokho, ngezinye izikhathi, kungukuthi okuqukethwe kuhlukanisa noma indawo ye-product et de la catégorie. In the situation, un vendeur devrait devise comment comment prendre ou utiliser quelque chose, et cela peut inciter les visiteurs à acheter le produit.
7. Liez le commerce électronique et le contenu
Ukuxhumana kuyindlela ebalulekile yokuthululisela izilaleli ze-accessibility et de digérer le contenu. Ngaphezu kwalokho, ilisiza les engxenyeni yokufuna ukuqonda ukubaluleka kwezindawo ezihlukahlukene ze-site. Sebenzisa i-navigation navigation kanye nekhasi lekhasi ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa ukuze uthole ulwazi olutholakala kalula ukuthola ulwazi kanye nezinkampani.
8. Hébergez le contenu sur votre site Web
Uma uthanda ukubeka ohlwini lwakho, qhafaza kwenye indawo oyisebenzisela yona ukuthengiswa kwempahla kanye non on microsite. Ama-Micros akuzona izinzuzo ekusebenzeni kohlobo lwemvelo, ngoba lokhu kungaphandle kwe-link.
9. Cabanga nge-syndiquer le contenu
Le content de votre site ne veut pas toujours les visiteurs. Uma kunjalo, i-commerçants du commerce électronique kufanele ihambisane nokuqukethwe. Cela uhlinzeke ngokuqukethwe kwamanye amasayithi abonisa ukuthi okuqukethwe ku-intanethi kuwebhusayithi yakho.
10. Yiba ohlakaniphile uma usubhala nge-syndicated content
Ukushicilelwa kwezihloko ezivela kwenye indawo kungase kube nesixazululo lapho uthola khona izinsiza zokudala okuqukethwe kwakho siqu. Ngaphandle kwalokho, kusukela ku-SEO yokubuka, lo mkhakha wezokuhweba unobungozi e-commerce électronique. Usiza abanye abantu ukuba bafunde ngezihloko zabo ezigciniwe.